मलेशिया रोजगारीको ‘भेन्डर’ संस्था हत्याउने आरोप लागेकी को हुन् पूजा चन्द ? - Dainik Nepal
मलेशिया रोजगारीको ‘भेन्डर’ संस्था हत्याउने आरोप लागेकी को हुन् पूजा चन्द ?
दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर १८ गते १४:०२
काठमाडौं, १८ मंसिर । मलेशियासँग श्रम सम्झौता भए पनि श्रमिकले जान नपाएको गुनासोका पछाडी एक जना व्यावसायीको स्वार्थ लुकेको चर्चा भइरहेको छ । त्यसमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आलोचना खेपिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद रामहरि खतिवडाले श्रममन्त्री विष्टसँग महिला व्यावसायी पूजा चन्दको सम्पर्क रहेको र उनैलाई भेन्डर संस्थाको जिम्मा दिने चलखेलको आरोप लगाए ।
खतिवडासँगै पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि श्रममन्त्री विष्टको नियतमा प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाएका छन् । उनले रोजगार सम्झौता भइसक्दा पनि कामदार पठाउने विषयमा मन्त्रालय मौन रहनुपछाडीको जवाफमात्र मागेका छैनन्, छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग पनि गरेका छन् ।
‘श्रम सम्झौता भइसक्दा पनि किन कामदार पठाउने विषयमा सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन, आफ्ना मान्छेलाई भेन्डर संस्था जिम्मा लगाउने विषय चर्चामा आएको छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसको छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्छ’, थापाले लेखेका छन् ।
जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी काम गरिरहेकी महिला पूजा चन्दसँग जोडेर मन्त्री विष्टलाई ठूला नेताले सांकेतिक रूपमा नै व्यंग्य प्रहार गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भनेका छन्,‘भेन्डर संस्था आफ्नालाई दिने चर्चा चलेको छ, सरकारले तुरुन्त मलेशियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने काम गर्नुपर्छ ।’
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा नै सरकार विवादमा तानिएका बेला मलेशियाको विषयलाई पनि नेताहरूले उठाउन थालेका छन् । श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक खण्डन अथवा जवाफ भने दिएको छैन । यति ठूलो आरोपमा पनि मन्त्री विष्ट मौन छन् ।
आखिर चन्द को हुन् ?
विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कीर्तिचन्द ठकुरीकी छोरी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्दकी बहिनी हुन् पूजा । उनी हाइड्रोपावर सम्बन्धी काम गर्छिन् । केही वर्षअघिसम्म उनको ठमेलमा तामस रेष्टुरेण्ट थियो ।
मन्त्री विष्टसँग उनले चार–पाँच पटक भेट समेत गरेकी छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम आफूले नगरेको र व्यर्थमा नाम जोडिएको भन्दै उनले मिडिया र नेताले उठाएका विषयमा आफ्ना नजिककासँग कुरा गर्दै आएकी छन् । स्रोतले भन्यो,‘उहाँको त्यस्तो केही सम्बन्ध नभएको र भेन्डर संस्था आफूले लिने विषय पनि नरहेको बताउनुहुन्छ ।’
के हो भेन्डर संस्था ?
केही समयअघि मलेशिया रोजगारीका क्रममा ठगी भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले रोजगारीमा पठाउने विभिन्न संस्थाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
भेन्डर संस्था भनेको रोजगारीमा पठाउने विभिन्न प्रकारका संस्था हुन् । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य जाँच, भीएलएन, आइएससीलगायतका संस्थाले मलेशियामा कामदार पठाउँदै आएका थिए । जुन भेन्डर संस्था हुन् ।
मन्त्री विष्टको कारबाहीका कारण केही महिनादेखि मलेशियामा कामदार पठाउने काम बन्द भएको थियो । पछि, मलेशिया सरकारसँगको सम्झौतापछि कामदार पठाउन कागजी सम्झौता भएको छ तर व्यवाहारमा लागु भएको छैन ।
भेन्डर संस्था संचालन गर्दै आएका ब्यक्तिलाई हटाएर बायोमेट्रिक, भीएलएन, आइएससी जस्ता संस्था आफ्नो हातमा पार्न श्रममन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने धुनमा लागेको पूजालाई आरोप छ ।
कति कामदार अलपत्र ?
मलेशिया रोजगारीका लागि भिसा लागेका कम्तिमा १० हजार कामदार जान पाएका छैनन् ।
भेन्डर संस्था नभएको र अन्यलाई प्रतिबन्ध गरेका कारणले भिसा लागेका कामदार मलेशिया जान नपाएका हुन् । मलेसिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले मन्त्री विष्टको यसैकारण आलोचना गरिरहेका छन् ।
श्रम स्वीकृति नलिदै भिसा अबधि सकियो भने कामदार दोहोरो खर्चको मारमा पर्ने बताइन्छ ।